मध्य तराईमा चिसोः पुसमा ठिकै, माघमा कक्रक्क – OSNepal
चिसोको कारण बिरामी भएर उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ । चिसोबाट खासगरी वृद्धवृद्धा, बालबच्चा र गर्भवती महिला बढी प्रभावित भएको नारायणी अस्पतालका फिजिसियन डा. उदयनारायण सिंहले बताए । चिसोका कारण मात्र बिरामी परेर दैनिक १०-१५ जना बिरामी आइरहेको उनको भनाइ छ । पहिले यो संख्या तीन/चार जना जति मात्र थियो ।राजधानीमा खबर छ ।
‘यस्तो अवस्थामा चिसोबाट बच्न बाहिर काम नपर्नेले सकेसम्म घरबाहिर हिँडडुल नगर्ने, न्यानो कपडा लगाउने, तातो र झोलिलो खाने कुरा बढी खाने, बालबच्चालाई पनि खुवाउने र बढी ख्याल गर्ने गर्नुपर्छ,’ डा. सिंहले भने । चिसोले खोकी लाग्ने घाँटी र छातीमा गाह्रो बनाउने हुँदा ३ दिनदेखि ५ दिनसम्म पनि निको नभए चिकित्सकको परामर्श लिन ढिलो गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।